३५० केजीको विशाल गोही भेटियो! - Everest Dainik - News from Nepal
३५० केजीको विशाल गोही भेटियो!
डार्बिन : अष्ट्रेलियाको निकै लोकप्रिय पर्यटकीय उत्तरी क्षेत्रमा संरक्षणकर्मीहरूले एउटा विशाल गोही फेला पारेका छन् । वन्यजन्तु अधिकारीहरूले उक्त गोही करिब १५ फिट लामो र करिब ३५० केजी तौलको रहेको बताएका छन् ।
क्याथारिन वन्यजन्तु संरक्षण केन्द्रका वरिष्ट वन्यजन्तु अधिकृत जोन बर्कले फ्लोरा नदीमा विशाल भाले गोही फेला परेको जानकारी दिए ।
३ वर्षअघि पनि यसै क्षेत्रमा १५.५ फिटको ठूलो गोही फेला परेको थियो ।
अष्ट्रेलियाले गोहीलाई संरक्षित जनावरको सूचीमा सन् १९७० मा सूचीकृत गरेयता उत्तरी क्षेत्रमा गोहीको संख्या बढ्दै गएको छ ।
पछिल्लो पटक समातिएको उक्त विशाल गोहीलाई प्रजनन केन्द्रमा लगिएको छ । अष्ट्रेलियामा फार्मका रूपमा गोहीपालन गरेर त्यसलाई मासु र छालाका लागि बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । एजेन्सी
याे पनि पढ्नुस राजदूत महेश दाहालद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश
ट्याग्स: अष्ट्रेलिया, गोही